UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
Dheefaha aad rabto, ku hel kharash jaban ilaa kharash la'aan dheeraad ah.
Dhammaan caymiska caafimaad isku mid looma wada sameyn.Taasi waa sababta aan ugu hanweynahay inaan ugu bixino qorshooyinka Medicaid kharash jaban ama kharash la'aan iyo xitaa macaashyo badan oo leh qorsheyaasheena labada caymis ee caafimaad ee hormuudka ah.1
Ma u qalantaa Medicaid iyo Medicare?
Waxaad sii wadi kartaa caymiskaaga, waxaadna ka sii heli kartaa macaashyo badan qorshaha labada caymis ee caafimaad.
Waxaan bixinaa qorsheyaal daboolaya daryeelka iyo adeegyada laga yaabo inaad maanta haysan.
Ma xiiseynaysaa qorshada labada caymis ee caafimaad? Aan aragno haddii aad u-qalanto.
U hel jawaabo su'aalahaaga ku saabsan Medicaid iyo Medicare.
1 saamiga suuqa CMS ee xogta diiwaangelinta bisha Maarso 2022 Context link
Cusbooneysintii Ugu Dambeysay: 04.13.2022 waqtiga 01:34 GALABNIMO CDT